Mashiinada mashiinka kululeeyaha Warshad - Shiinaha Mashiinka Thermoforming Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaasha
Mashiinka Baakadaha Thermoforming Fexible
Vacuum Desktop (buufin) Mashiinka Baakadaha
Mashiinka Mashiinka Baakada Vacuum
Mashiinka Baakada Vacuum Joogtada ah
Mashiinka Baako Vacuum Golaha Wasiirada
Cadaadi mashiinada baakadaha
2021 Naqshadayntii Ugu Dambeysay Mashiinka Xirmooyinka Noodle -...
Mashiinnada baakadaha maqaarka ee faaruqinta ah
Vacuum packer maqaarka sidoo kale waxaa loo yaqaan mashiinada baakadaha maqaarka heerkulka jirka. Waxay sameysaa saxaarad adag ka dib kululaynta, ka dibna waxay ku dabooleysaa filimka ugu sarreeya saxaaradda hoose si aan kala go 'lahayn ka dib marka la nadiifiyo & kuleylka. Ugu dambeyntiina, xirmada diyaarka ah ayaa soo bixi doonta ka dib dhimista-dhimista.
Mashiinka baakadaha jawiga tooska wax looga beddelay ayaa sidoo kale loo yaqaan Thermoforming mashiinnada baakadaha filimka adag. Waxay ku kala bixinaysaa xaashida balaastigga ah kuleyliyaha ka dib kululeeyaha, ka dibna gaas ku daadi, ka dibna ku xir daboolka dusha kore. Ugu dambeyntiina, waxay soo saari doontaa xirmo kasta ka dib dhimista-dhimista.
Waxay u kala bixineysaa xaashida xirmo hoose oo jilicsan ka dib kuleylka, ka dibna faakuumka oo xir xirmada hoose oo leh dabool sare. Ugu dambeyntiina, waxay soo saari doontaa xirmooyin kasta oo shaqsi ah ka dib goynta.